चीनले गर्यो यति ठुलो घोषणा, भन्यो – नेपालीहरूकाे ग्यारेन्टी हामी लिन्छौं — Sanchar Kendra
चीनले गर्यो यति ठुलो घोषणा, भन्यो – नेपालीहरूकाे ग्यारेन्टी हामी लिन्छौं
यसैबीच चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चितवनको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीले बताएका छन् । देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा रहेको चितवनमा चिनियाँ पर्यटक आउने क्रम निकै कम भएको छ ।
उनका अनुसार जनवरीदेखि अपि्रल महिनासम्म धेरै चिनियाँ पर्यटकहरु सौराहा, मेघौलीलगायतका चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आउँछन् । सौराहा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये चिनियाँको संख्या सबैभन्दा धेरै रहने गरेको छ । सौराहामा दैनिक ५ सयदेखि ७ सयसम्म चिनियाँ पर्यटकहरु घुम्न आउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ३१ डिसेम्वरमा चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नै चिनियाँ पर्यटकको संख्यामा कमि आएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सौराहामा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरुको संख्या बढी छ । विभिन्न संघसंस्था र निकायहरुले सौराहामा गर्ने कार्यक्रमहरुले व्यवसाय धानिएको उनीहरुको भनाइ छ । विगतका वर्षहरुमा चितवन आउने कूल पर्यटकहरुमध्ये चिनियाँ पर्यटकहरुको संख्या ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
त्यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न पाँच शय्याको छुट्टै आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले अस्पतालको ‘ए’ ब्लकको तेस्रो तलामा यस्तो वार्ड बनाइएको जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए वा आशंका लागेका बिरामीहरुलाई यहीँ राखेर उपचार गरिने डा. तिवारीले बताए ।
यसका लागि अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको जाँच गर्न कन्सलटेन्ट फिजिसियन डा. प्रमोद पौडेल र डा. कल्याण सापकोटालाई फोकल पर्सन तोकेको छ । भरतपुर अस्पतालले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न पाँचबुँदे निर्णय पनि गरेको छ ।
भाइरसको संक्रमण भएका बिरामीहरुको घाँटीबाट र्‍यालको नमूना निकाली राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइने अस्पतालले जनाएको छ । साथै, भाइरसका बारेमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. तिवारीले बताए ।
यसैबीच, भरतपुर विमानस्थलमा आउने यात्रुहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भए-नभएको बारेमा जाँच गर्न हेल्प डेस्क राख्ने तयारी गरिएको छ । विमानस्थल प्रमुख पवन गौतमका अनुसार आइतबारबाट भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा हेल्थ डेस्क खडा गरिने जानकारी दिए ।
उता अस्ट्रेलियाले चीनबाट आउनेहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको छ। शनिबार अस्ट्रेलियाली सरकारले आफ्ना नागरिकबाहेक अरू कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
चीनमा पहिलोपटक देखिएको नोबेल कोरोना भाइरस अहिले विभिन्न फैलिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अस्ट्रेलियाले यस्तो निर्णय लिएको हो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भने, ‘अस्ट्रेलियाका नागरिक, अस्ट्रेलियाका बासिन्दा, उनीहरूमा आश्रित, कानुनी संरक्षक तथा अभिभावकलाई मात्रै चीनबाट अस्ट्रेलिया आउन अनुमति दिइनेछ।’
यो व्यवस्था शनिबारदेखि नै लागू भइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले नाकाहरूमा यसका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था गरिसकिएको र सरकारी अधिकारीहरू तथा प्राविधिक र विज्ञहरू पनि खटाइसकिएको बताए। अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकहरूलाई चीन भ्रमणमा नजानसमेत सूचना जारी गरेको छ।